Inguqulo 0.9.7.0 – Ukulungisa netimphawu nxazonke, futhi SuperProxy alpha
June 6, 2015 by okunikezwayo 2 Amazwana
Version New ulapha!
Sicela kuthuthukiswe! Sicela, Sicela kuthuthukiswe! Ukujabulisa nge ushukela ezinye phezulu.
Kungani kufanele kuthuthukiswe?
Le nguqulo fixes-Google support proxy, okusho ukuthi ezenzakalelayo Google Translation uzosebenza futhi.
Le nguqulo ilungisa format database, okusho wordpress 4.2 isekelwa, futhi kulindeleke ukuba ugcine ~ 40% of the Usayizi etafuleni
Ekugcineni Unenguqulo kokuqala umhleli backend translation, Siyobonisa wena izintambo bangempela baye bahumusha futhi uvumele ukuba ubuyekeze ngokushesha bese ususa labo.
With ezinye luck, une inketho umane Kusaqhubeka dashboard yakho wordpress. Kunconywa ukuthi isipele, njengoba azikho indlela ngemuva izinga database kuqede.
Any nezimfanelo ezingavamile zomunye, nezindaba, Izinkinga – the xhumana nathi yakha ungumngane wakho.
Kuyini lokhu SuperProxy futhi kungani kufanele sikwazi lokhu?
SuperProxy kusha yethu “Thola okusheshayo ocebile” scheme. Hmm…
Empeleni, sisebenzisa ISIZINDA ukuphela ukuvumela izinkampani nabantu ukuba kusakazwe ukufinyelela web. Sizobe ukuwukhokhela traffic, ngakho uma wathenga service ibamba futhi une amathani idatha ukudlulisa ungayisebenzisi, siyosazisa ngempela ukuthi sikwazi lesi sici, kuyoba asisekele futhi cishe iyobe iwufanele ngenkathi yakho. We izokhipha imininingwane eyengeziwe ngalesi njengoba ziba atholakalayo.
Futhi – kuze lonke Changelog:
Woo ukuhlanganiswa kwamaphutha
Umsele the Base64 ukuqonda futhi sinciphise ubukhulu amakhasi lihumushekela
Ukulungisa Widget kwenza amafulegi ubonise ngendlela efanele uma okungalungile ibhokisi sizing yayisetshenziswa
Ukususwa front end bar inqubekela, kwaba asivamile ukubonwa noma esetshenziswa futhi umonakalo ngaphezu kwakufanele
3 izilimi ezintsha kusekelwa bing
shortcode zakhona ukuze
gwema ukuhunyushwa ubhalo / JSON okuqukethwe fixes nezindaba nabathile plugins thwebula Addon
Sekela imfanelo isimelisithombe, ngiyabonga Mark Serellis
Abanye usekela ibhizinisi lwemibhalo plugin
Ngakho – Jabulela nguqulo, futhi ungabi umfokazi, usazise ukuthi isebenza kanjani ngawe.
Lalihlezi Ngaphansi: Izimemezelo ukukhululwa, Izibuyekezo Software Umake With: google ukuhumusha, minor, ukukhululwa
Inguqulo 0.9.3 – U amafulegi zami go kuphi?
Kwangathi 10, 2013 by okunikezwayo 40 Amazwana
Abazange kude kakhulu, sicela ubuke le vidiyo noma ufunde imiyalelo engezansi.
Yini okufanele uyenze ukuze ngiphinde ngibabone?
Vele uthuthukele le okufushane umnyuziki besebenzisa imiyalelo elandelayo:
Thuthukela version yakamuva kusuka wordpress.org (okusho kuyoba owokugcina, kukhona)
Hlola “vumela uthuthukele okufushane umnyuziki” in the izilungiselelo
Hlola for ngcono futhi enze ngcono, yilokho kuphela!
Yini entsha e-version 0.9.3:
Update izosebenza kuyiwebsite lethu
Ezinye fixes bug
Namandla okususa rel = indlela okuyinto okwakungafanele ewusizo njalo
(0.9.3.1) Siye sakhululwa inguqulo sub ukuze nifaka izilimi ezintsha usekelwa Google, okwenza count yethu isamba – 73! (Uma umuntu lapha ekhuluma Hmong, sicela uxhumane nathi)
Lalihlezi Ngaphansi: Imilayezo jikelele Umake With: okufushane umnyuziki, minor, ukukhululwa, ividiyo, wordpress.org
Inguqulo 0.9.1 – Ngcono njalo
January 23, 2013 by okunikezwayo 4 Amazwana
Ukuhumusha Letha Abantu Together
Kwakufanele posted phambilini mayelana 0.9.1 okuyinto inguqulo hhayi nice nabathile ukuthuthuka nice. Baye Kodwa thina belinde lolu izithombe nice ngokweqile, ezenziwe kwi Fiverr by an animator amazing, lokho kwenzeka ukuba ezihlobene ngegazi ethimbeni lapha 🙂
Siphinde ekusunguleni kamnandi Iwijethi Igalari page, Hamba ubone!
Wanezela usizo ezinye ngaphakathi esibonakalayo Admin for imibuzo evame kakhulu (okhiye – akukho, awudingi izinkinobho ngokuzenzakalela)
Vumela jQueryUI version ukuba overriden, ekuxazululweni izingxabano eziningi (themes ezindala, yonke uhlobo izingxenye ne ezinguqulweni unsorted of jQuery and jQueryUI)
A fix lapho abathile plugin ezimbi ufaka. CSS ngendlela okungafaneleki (lokhu kukhutshazwe uyabona yiziphi izilimi zase selecred)
Wanezela umsebenzi transposh_echo – ubone ukuthuthukiswa yethu indawo for imibhalo kanye ukusetshenziswa
Fixes for amawijethi, Ukufakwa lula nge wokunqamulela, old eyinqolobane fixes, omazisi isuswe
Unezela touch Punch kuya admin, Ukukhetha kolimi sokuvumela on touch amadivaysi
Fixes nokuthi bafuna ezincane ezatholakala kusukela 0.9.0
What usalindeni? Thwebula inguqulo yakamuva manje!
Lalihlezi Ngaphansi: Imilayezo jikelele Umake With: minor, ukukhululwa
Inguqulo 0.8.5 – Nathi ukusekela Lao
September 17, 2012 by okunikezwayo Shiya amazwana
A frog kanye bamukelekile mouse kuneLaos
Well, Google nje umemezele ukuhumusha blog wabo ukuthi uyokusekela Lao, ngolimi olusemthethweni kuneLaos, ngakho siye kwanezelwa ikhodi edingekayo enza ukukhululwa okusheshayo nge usekela lolu limi, okuyinto busekelwa Omunye Hour Translation.
Le nguqulo usevele out izinsuku ezimbalwa kodwa inkinga yangempela ukuthola lolu live okuthunyelwe ekutholeni isithombe. Asibi ngempela kuqinisekiswe ukuthi isithombe olufanele kunazo, kodwa okungenani it tingoma.
Jabulela nguqulo entsha.
Lalihlezi Ngaphansi: Imilayezo jikelele, Izimemezelo ukukhululwa Umake With: google ukuhumusha, minor, izilimi ezingaphezu, ukukhululwa